Guhaad - Wikipedia
Guhaad waxaa af ingiriis lagu dhahaa anxiety.
Gebigeen waxaan ka welwelsan nahay dembiga iyo dulmiga xaafaddeenna ka socda. Waqtiyadan dhibta badan dadka badankood waxay ka welwelsan yihiin mustaqbalka. Dad badan baa dhimashada ka cabsada. Maalmahan dad badan baa ka cabsado inay gurigooda ka baxaan weliba markay habeen noqoto.
Walaaca ayaa ku shaqayn kara—ilaa inta ay kugu dhaqaajinayso nooca saxda ah ee ficilka.
Sideen ula tacaali karaa walaaca? „Maxaad samayn kartaa haddii welwelku u muuqdo inuu adiga kaa soo horjeedo halkii uu adiga kugu shaqayn lahaa?
Maxaad samayn kartaa. Weydii macquulnimada welwelkaaga. “Midkiinnee intuu welwelo dhudhun ku dari kara cimrigiisa?”—Matayos 6:27.
Tan waxa ay ka dhigan tahay: Ilaa uu welwelku kuu horseedayo xal, waxay ku kordhin doontaa oo kaliya dhibaatadaada -ama waxay noqon doontaa dhibaatadaada.
Marba maalin wax u qaado. "Weligaa ha ka welwelin maalinta xigta, waayo, maalinta xigta waxay yeelan doontaa welwelkeeda. Maalin kasta dhibaatooyinkeeda waa ku filan yihiin.”—Matayos 6:34.
Tan waxa ay ka dhigan tahay: Macno yar ayay samaynaysaa in la qaado mashaakilaadka berrito - kuwaas oo qaarkood laga yaabo in ay waligood run noqdaan.
Baro inaad la noolaato waxaadan bedeli karin. "Kuwa dheereeya mar walba kuma guulaysto tartanka, . . . kuwa aqoonta lihina weligood ma liibaanaan, waayo, waxaa kulligood ku dhaca wakhti iyo waxyaalo lama filaan ah.”— Wacdiyahii 9:11.
Tani waxay ka dhigan tahay: Mararka qaarkood ma bedeli kartid duruufahaaga, laakiin waxaad bedeli kartaa sida aad u aragto.
Xaaladdaada meel ka fiirso. “Hubi waxyaalaha ugu muhiimsan.”—Filiboy 1:10.
Tan waxa ay ka dhigan tahay: Dadka werwerkooda meel ka dhigaa waxa ay u badan tahay in ay ka adkaan karaan.
Qof la hadal. “Ninka qalbigiisa waxaa ku cusboonaaday welwelka, Laakiinse eray wanaagsan baa ka farxiya.”—Maahmaahyadii 12:25.
Tani waxay ka dhigan tahay: Waalid ama saaxiib ayaa laga yaabaa inay ku siiyaan talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan sida loo yareeyo walaacaaga.
Ducada. Walwalkiinna oo dhan ku tuura [Ilaah], maxaa yeelay, isagu dan buu idinka leeyahay.”—1 Butros 5:7.
Tan waxa ay ka dhigan tahay: Salaaddu maaha khiyaamo maskaxeed. Waa xidhiidh dhab ah oo lala galo Rabbiga Ilaaha ah, kaasoo ballanqaaday: “Ha welwelina, waayo, waxaan ahay Ilaahiinna. Waan ku xoogayn doonaa, haah, waan ku caawin doonaa.”—Ishacyaah 41:10.”
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Guhaad&oldid=229901"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 31 Jannaayo 2022, marka ee eheed 19:33.